NgoNovemba 21 kwaphawula iholidi elikhulu lama-Orthodox likaMichael, okuyinto eyinhloko yazo zonke ezinikezelwe izingelosi ezingcwele. Amakholwa abantu bahlonishwa kakhulu ngaleli holide futhi ngokufanayo bawubiza ngokuthi usuku lukaMikhailov. Isinqumo somkhosi sithathwe eMkhandlwini WaseLawodikeya ngekhulu le-4.
Leli sonto laqanjwa ngegama lazo zonke izingelosi ezingcwele, isikhulu phakathi kwazo okungukuthi ingelosi enkulu (isikhundla esiphakeme ngokuqhathaniswa nezingelosi ezilula), uMichael, ohlonishwayo ngokuvikela ukholo nokulwa nokuhlubuka nobubi. Kulolu suku, kuyisiko ukudumisa amabutho aseZulwini nomholi wabo, uMikayeli uMikayeli omkhulu, ngokuthandaza, futhi acele ukuba asivikele, asiqinise futhi asisize sidlule indlela enzima yokuphila ngesithunzi.
Usuku lweMikhailov ngoNovemba
Ekuhunyushweni okuvela egameni lesiHeberu , uMichael usho ukuthi "Ubani onjengoNkulunkulu." EmiBhalweni Engcwele, uMikayeli omkhulu uMikayeli ubizwa ngokuthi "isikhulu", "umholi weNkosi" futhi ubhekwa njengowompi omkhulu olwa noDeveli nokungafani komthetho phakathi kwabantu, ngakho-ke ubizwa ngokuthi "archistrategist", okusho ukuthi - umpi ophakeme, umholi. Uthatha ingxenye esondelene kakhulu ekupheleni kweSonto futhi kubhekwa njengomphathi wezilwane.
Usuku lukaholide lukaMichael ngoNovemba aluyona ingozi. Ngemuva kuka-Mashi, bebheka inyanga yokuqala kusukela ngesikhathi sokudalwa kwezwe, ngoNovemba inyanga yesishiyagalolunye, ukuhlonishwa kwezigaba eziyisishiyagalolunye zezingelosi kanye nedili likaSt. Michael kanye nazo zonke ezinye izingelosi.
Imikhosi kaMikayeli ingelosi enkulu ayidluli, lolu suku aluqapheli ukudla, amaKristu angama-Orthodox avunyelwe ukuthatha ukudla. Leli holide lalihlale ligujwa kakhulu, izivakashi zamenywa endlini, idili nama pie , kwakhiwa uju olusha. Ngokushesha ngemva kwaleli holide, kwafika izikhala eziqinile, ngakho ukugubha uSuku lukaMikhailov kungahlala ngesonto.
Yini ongayenza ukuze kusetshenziswe indlu ngendlela engafanele futhi ekuqaleni?
Usuku Lengelosi Ludmila
Isipho kumfana onawo ngezandla zakhe
Usuku Lomhlaba Chocolate
Indlela yokuhlobisa isihlahla sikaKhisimusi?
Izipho ezivela emalini yomshado
Indlela yokugubha i-Easter eRussia?
Kuphi ukugubha uNyaka Omusha?
Usuku Lomhlaba Wama-Oceans
Usuku Lomhlaba Wonke Wokuthula
Usuku Lwezingane Zomhlaba Wonke
Indlela yokwenza udonga ngezithombe?
I-Cream shizi yekhekhe - iresiphi
U-Arnold Schwarzenegger ubelokhu enganelisekile ... ngokubonakala kwakhe!
Ukwelashwa kokukhwehlela ngesikhathi sokuncelisa
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngekhofi eluhlaza?
I-Berodual ne-laryngitis ezinganeni
Izitsha zekhalori eziphansi zokusindiswa kwesisindo - zokupheka
Isitayela seJapane ngaphakathi - ukumemezela kweMpumalanga
UTsiperus - izimpawu nezinkolelo-ze
Ichibi Karachi - ukuzijabulisa okungcolile
Kungakhathaliseki ukuthi zikhona ngenyanga nge-ectopic pregnancy?
I-biography yomculi uRihanna
I-closet nge-niche ngaphansi kwe-TV
Amathayili e-Ceramic endlini yokugezela
ULindsay Lohan noJeor Tarabasov basuke behamba ilanga eMauritius
Ukuphakama nesisindo sika Kate Middleton
Umcwaningi uJonathan Reese Myers kuqala wafika kuqala kwefilimu nomkakhe nendodana yakhe
Isobho se-Cheese ku-multivarquet - zokupheka okumnandi kunazo zonke zesidlo esibucayi
14 ukhula olungadliwa ngokuphepha
Isobho semifino enomhluzi wezinkukhu